Basola iziphathimandla kuminza ingane | News24
Basola iziphathimandla kuminza ingane
ISITHOMBE: sithunyelweLihle Gebuza.
UMNDENI womfana ominze washona kwindawo yokubhukuda (Swimming pool) e-Eastwood uthi usola abaphathi bakule ndawo ngokuba budedengu nabathi ikona okuholele ekutheni bagcine belahlekelwe indodana yabo.
ULihle Gebuza (14) wase-Tamboville uminze washona kulendawo ngoMgqibelo mhlaka-3 kuLwezi (November) ngesikhathi ehambe wayozijabulisa nabangani bakhe.
Ngokusho kukanina womfana, uNks Thembisa Gebuza uthe indodana yakhe wayigcina ngezikhathi zase kuseni ngehora le-11 (11am) ngesikhathi ihamba nabangani bayo kodwa abazange basho ukuthi bayaphi. Uthe wazitshela ukuthi bahambile bayodlala njengenjwayelo.
“Ukwazi kwami ukuthi indodana yami isiminzile ngazi ngoba naku sekufika abangani bakhe laba ayehambe nabo bezongitshela ukuthi amaphoyisa ayangibiza athi angize e-Eastwood ngoba sekukhona into eseyivelile. Abangani bakhe uLihle bangitshela ukuthi ngesikhathi besuka bona babona engathi usaphefumula bacabanga ukuthi usaphila.
“Ngathi uma ngifika ngafika sekugcwele abezimo eziphuthumayo kanye namaphoyisa akekho noyedwa owangitshela ukuthi kwenzakalani ukuze indodana yami ishone. Abezimo eziphuthumayo bangitshela nje ukuthi bazamile ukumsiza kodwa behluleka.Akekho noyedwa umsebenzi okanye isiphathimandla sakulendawo engasibona okanye ke umuntu ogada izingane zibhukuda ukuthi angitshele ukuthi kwenzekeni. Ngibuhlungu kakhulu ngalento eyenzekile ikakhulukazi nendlela engezwa ngayo ukuthi ngizotshelwa izingane into ebucayi kangaka,” kubeka yena.
UNks Gebuza uthe uLihle bekuyiyona ngane kuphela anayo kodwa ayisekho ngenxa yobudedengu kwabantu abathize. Uthe yena ayikho into azoyisho kulabo abangamele le ndawo yokubhukuda kodwa ibona ekumele beze kuyena bazomuchazela ukuthi kwenzekeni.
“Ngiyazi ukuthi ngisho noma yini abangayisho ngeke ize imubuyise umntanami useshonile vele, kodwa loko kuzobe kukhombisa ukuthi bayalibona iphutha labo.Ngiyafuna ukwazi ukuthi kwenzekeni kumntwana wami eseze eshona nje,” kubeka yena.
UKhwezi Jila nongumalume kaLihle uthe bengumndeni basola lendawo ngokungazwelani nabo kanye nokungabi nandaba nabantu.
“Kuyacaca ukuthi lendawo ayiphephile kanti futhi akekho omunye umzali ozovuma ukuba ingane yakhe ihambe iyobhukuda khona. Ukube bekukhona umuntu ogada izingane uma zibhukuda (life guard) angabe akwenzekanga konke loku umshana wami engabe usaphila. Kusho ukuthi lendawo into enendaba nayo ukuthi ithathe imali nje kuphela ayinandaba nokuthi kwenzakalani ezinganeni zabantu ezifika zizozijabulisa.
“Sisashaqekile nje singumndeni ngalesi sigameko kanti futhi sisola abanikazi bayo. Uma kungukuthi bayahluleka ukuqinisa ezokuphepha kungcono bavele bayivale lendawo ngoba kusobala ukuthi ayiphephile makunje. Asifuni ukuthi kuphinde kwenzeke esinye isigameko esifana njengalesi,” kubeka yena.
Uthe uLihle ubengayona ingxenye yabafundi abafundela ukubhukuda ngisho esikoleni kodwa bacabanga ukuthi uhambe ngoba beyozijabulisa nabangani bakhe.
ULihle uchazwe njengengane ebeyihlakaniphile, ethula kodwa futhi ekuthanda ukudlala ikakhulukazi ibhola lezinyawo.
Umasipala uMsunduzi awuzange uphendule imibuzo okade uthunyelelwe yona kwaze kwashaya isikhathi sokushicilela.Okhumulela amaphoyisa esiteshini i-Mountain Rise uKapteni Gay Ebrahim utshele iphephandaba i-The Witness ukuthi kuphenywa icala lokushona komuntu.